Tango Pouch Chikwama, Bag Remanheru Ndoimwe - Dhizaini magazini
Chikwama, Bag Remanheru Ndoimwe
Chikwama, Bag Remanheru Ndoimwe Iyo Tango Pouch ibhegi rakatanhamara neyakagadzirwa zvechokwadi. Icho chidimbu chinogona kupfekedzwa chehunyanzvi chakapfekwa ne wristlet-chigaro chinokutendera kuti iwe uve nemaoko ako akasununguka. Mukati mune yakakwana nzvimbo uye yekupeta maginari kuvhara kuvakwa kunopa zvisingatarisirwi nekuvhurika kwakawanda. Iyo Pouch inogadzirwa ne yakapfava waxed mhuru yeganda ganda yeganda kune inoshamisa kubata kubata uye puffy side inserts, nechinangwa chekusiyanisa neyakavakwa zvakanyanya muviri unogadzirwa kubva kunonzi unoratidzwa ganda.
Zita rechirongwa : Tango Pouch, Vagadziri zita : Anne-Christin Schmitt, Izita remutengi : Gretchen.
Chikwama, Bag Remanheru Ndoimwe Anne-Christin Schmitt Tango Pouch